SJ oo soo bandhigtay tareeno cusub | Somaliska
Shirkada tareenada ee SJ ayaa soo bandhigtay 20 tareen oo cusub kuwaasoo loogu magacdaray X3000 iyaga oo badali doona qaar badan oo ka mid ah tareenada dheereeya ee hada lagu magacaabo X2000. Tareenadaan ayaa la sheegay in ay ka casrisanyihiin kuwa x2000 isla markaana ay meelaha qaar ka xawaara sareeyn doonaan.
SJ ayaa sheegtay faaidada ugu badan ee tareenadaan in ay noqon doonto isku halaynta iyaga oo aan sahal ku ciladoobi doonin. Tareenada X2000 ayaa lagu bartay farsamo xumo badan oo ka dhacda xiliga qaboobaha. Tareenadaan cusub ayaa waxaa ku baxday lacag gaareysa 300$ milyan oo dollar.
Tareenada cusub ee X3000 ayaa hawshooda bilaabi doona sanadka cusub iyaga oo u kala gooshi doona Stockholm iyo magaalooyinka Östersund, Sundsvall iyo Falun. Tareenada cusub ayaa sidoo ku qalabaysan aalado casri ah oo ay isku maaweelin karaan musaafiriinta.
asc x3000 swedan hada uu u cusub yahay faransiiska mar aan tagay 2007 way ka gudbeen x3000 anigoo ay ii ahayd marki iigu horaysay aan raaco x3000 faransiiska waxaa jiro tareeno xawligooda kan ka sii dheereeyo
October 18, 2011 at 01:46
Hanni abaayo mid hamoogaan in Frace eey aad uga dhaqaalo badan tahey Sweden marka sidaa ayaa sababeysa iney soo iibsadaan X3000 xiligan tan kale France iyo Italy waa labada wadan ee Europe xaga Tareenada ugu horeeya Dunida dhana waxaa nabar one ah hada China waxaa ku xiga Japan xaga tareenada.
miyaad moogtihiin in soomaaliya x2011 laga samaynaayo maxaad faransiis iyo sweden kaga meeraysanaysaan!!!!! oo insha allaahu ay u kala gooshayaan gobolada oo dalka sida magaalo madaxda muqdisho 2baad hargeysa 3aad kismaayo iyo dalka oo dhanba
Kkkkkkkkk abdiasis abowe afkaaga caano iyo malab lagu qabey u sheeg somalidan wadamada aysan udhalan xayeysiinaysa war somalia hormartay oo xarakaynaysa mardhaw